အာဆင်နယ်အသင်း အောင်မြင်မှုနောက်ကွယ်က အမ်မရီရဲ့ လျှို့ဝှက်ချက် (၂)
အာဆင်နယ်အသင်းကို အကောင်းဆုံး ဦးဆောင်နေတဲ့ Unai Emery ရဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်က ဘာများလဲ (၂)
9 Oct 2018 . 2:57 PM
ဒီရာသီမှာ အာဆင်နယ်အသင်းကို ရလဒ်ကောင်းတွေ ရယူပေးနေတဲ့ နည်းပြအူနိုင်းအမ်မရီ Unai Emery ရဲ့ လျှို့ဝှက်ချက် အပိုင်း(၁)ကို ဖော်ပြခဲ့ပြီးပါပြီ။ အခု အပိုင်း(၂)ကို ဆက်လက်ဖော်ပြလိုက်ပါတယ် . .
ပေါက်ကွဲအား ပိုပြင်းထန်လာတဲ့ Aubameyang နဲ့ Lacazette
လန်ဒန်မြေကို စတင်ခြေချခဲ့ကတည်းက အူနိုင်းအမ်မရီရဲ့ အဓိက လုပ်ဆောင်ရမယ့် ကိစ္စတွေထဲမှာ အူဘာမီယန်း Aubameyang နဲ့ လာကာဇက် Lacazette တို့ရဲ့ အကောင်းဆုံးခြေစွမ်းကို ဖော်ထုတ်နိုင်ဖို့ပါပဲ။ ဒီကစားသမားနှစ်ဦးအတွက် အာဆင်နယ်အသင်းက ပေါင်သန်း(၁၀၀)နီးပါး သုံးစွဲခဲ့ရပြီး သူတို့နှစ်ဦး တွဲဖက်ညီညီ ကစားနိုင်ဖို့က အူနိုင်းအမ်မရီရဲ့ ခေါင်းပေါ်ကျလာခဲ့တယ်။ ဒီရာသီမှာ အူဘာမီယန်းနဲ့ လာကာဇက်တို့ နှစ်ဦးပေါင်းသွင်းဂိုးက (၁၁)ဂိုးအထိရှိလာပြီဖြစ်လို့ အူနိုင်းအမ်မရီရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေက မှန်ကန်ခဲ့ပြီလို့ ဆိုရမယ်။ အာဆင်နယ်အသင်းရဲ့ ဘဏ္ဍာရေးအခြေအနေက အကန့်အသတ်ရှိနေတာကြေင့်လည်း အမ်မရီဟာ ကစားသမားသစ်တွေကို ကြေးကြီးကြီးပေး ခေါ်ယူဖို့ထက် အသင်းရဲ့ လက်ရှိကမ္ဘာ့အဆင့် ကစားသမားတွေဆီက အကောင်းဆုံးအရည်အသွေးတွေကို ညှစ်ထုတ်ဖို့ပဲ ကြိုးစားရမယ့်အခြေအနေပါ။ နောက်တစ်ခုက အမ်မရီဟာ လူငယ်အသင်းနည်းပြတွေနဲ့ ပုံမှန်တွေ့ဆုံလေ့ရှိပြီး အကယ်ဒမီက လူငယ်ကစားသမားတွေရဲ့ အနေအထားကိုလည်း စုံစမ်းမေးမြန်းလေ့ရှိပါတယ်။
အမ်မရီဟာ သူ သဘောကျတဲ့ Possession Game နည်းဗျူဟာထဲမှာ ကစားသမားတွေ အံဝင်အောင် ကစားနိုင်ဖို့ ကြိုးစားပြင်ဆင်နေတယ်။ သူလိုချင်တဲ့ ပုံစံက ရှင်းရှင်းလေးပါပဲ။ ဂိုးသမားဆီက စတင်တဲ့ တိုက်စစ်က ခံစစ်၊ ကွင်းလယ်ကနေ ရှေ့တန်းဆီကို ဘောလုံးဆုံးရှုံးမှု အနည်းဆုံးဖြစ်အောင် ရောက်ရှိဖို့ပါ။ အရင်လို ဂိုးရှေ့မှာ Wasteful Passing တွေနဲ့ ကစားမယ့်အစား ထိရောက်မှုရှိတဲ့ Possession-based Style ကို ပြောင်းလဲပစ်ခဲ့တယ်။ ဒါကြောင့် အခု အာဆင်နယ်ကစားပုံက Entertainment ဖြစ်တဲ့အပြင် Effective လည်းဖြစ်နေတာကို ပရိသတ်တွေ အသိပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
သကြားဓာတ်ပါတဲ့ အချိုရည်တွေ မသောက်ရဘူး
အမ်မရီဟာ လေ့ကျင့်ရေးကွင်းမှာ သကြားဓာတ်ပါတဲ့ အချိုရည်တွေ သောက်သုံးတာကို တင်းတင်းကြပ်ကြပ် ပိတ်ပင်ထားတယ်။ အာဆင်နယ်အသင်းကို အာစင်ဝင်းဂါး ကိုင်တွယ်ခဲ့တုန်းက ကစားသမားတစ်ဦးဟာ ကိုကာကိုလာဗူးကို ကိုင်ပြီး လေ့ကျင့်ရေးကွင်းထဲ ၀င်လာခဲ့ပေမယ့် အာစင်ဝင်းဂါးဟာ လျစ်လျူရှုခဲ့ဖူးတယ်။ အခုအချိန်မှာ အဲဒီလို လုပ်ရပ်မျိုးကို အမ်မရီက သည်းခံနေမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
၂၀၀၃-၀၄ ရာသီမှာ ပရီးမီးယားလိဂ်သမိုင်းတစ်လျှောက် ရှုံးပွဲမရှိစံချိန်နဲ့ ချန်ပီယံဆု ရရှိခဲ့တဲ့ အာဆင်နယ်အသင်းဟာ ပရီးမီးယားလိဂ်ချန်ပီယံဆုကို ကိုင်မြှောက်ခွင့်မရတာက (၁၀)စုနှစ် တစ်ခုကျော်သွားပါပြီ။ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်း FA ဖလားနဲ့သာ ချွေးသိပ်နေရတဲ့ အာဆင်နယ်ပရိသတ်တွေရဲ့ မျှော်လင့်ချက်ကို အမ်မရီတစ်ယောက် ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်မလားဆိုတာကတော့ . . .
Photo:The Sun,The Telegraph,i Newspaper,Racing Post
အာဆငျနယျအသငျးကို အကောငျးဆုံး ဦးဆောငျနတေဲ့ Unai Emery ရဲ့ လြှို့ဝှကျခကျြက ဘာမြားလဲ (၂)
ဒီရာသီမှာ အာဆငျနယျအသငျးကို ရလဒျကောငျးတှေ ရယူပေးနတေဲ့ နညျးပွအူနိုငျးအမျမရီ Unai Emery ရဲ့ လြှို့ဝှကျခကျြ အပိုငျး(၁)ကို ဖျောပွခဲ့ပွီးပါပွီ။ အခု အပိုငျး(၂)ကို ဆကျလကျဖျောပွလိုကျပါတယျ . .
ပေါကျကှဲအား ပိုပွငျးထနျလာတဲ့ Aubameyang နဲ့ Lacazette
လနျဒနျမွကေို စတငျခွခေခြဲ့ကတညျးက အူနိုငျးအမျမရီရဲ့ အဓိက လုပျဆောငျရမယျ့ ကိစ်စတှထေဲမှာ အူဘာမီယနျး Aubameyang နဲ့ လာကာဇကျ Lacazette တို့ရဲ့ အကောငျးဆုံးခွစှေမျးကို ဖျောထုတျနိုငျဖို့ပါပဲ။ ဒီကစားသမားနှဈဦးအတှကျ အာဆငျနယျအသငျးက ပေါငျသနျး(၁၀၀)နီးပါး သုံးစှဲခဲ့ရပွီး သူတို့နှဈဦး တှဲဖကျညီညီ ကစားနိုငျဖို့က အူနိုငျးအမျမရီရဲ့ ခေါငျးပျေါကလြာခဲ့တယျ။ ဒီရာသီမှာ အူဘာမီယနျးနဲ့ လာကာဇကျတို့ နှဈဦးပေါငျးသှငျးဂိုးက (၁၁)ဂိုးအထိရှိလာပွီဖွဈလို့ အူနိုငျးအမျမရီရဲ့ လုပျဆောငျခကျြတှကေ မှနျကနျခဲ့ပွီလို့ ဆိုရမယျ။ အာဆငျနယျအသငျးရဲ့ ဘဏ်ဍာရေးအခွအေနကေ အကနျ့အသတျရှိနတောကွငျေ့လညျး အမျမရီဟာ ကစားသမားသဈတှကေို ကွေးကွီးကွီးပေး ချေါယူဖို့ထကျ အသငျးရဲ့ လကျရှိကမ်ဘာ့အဆငျ့ ကစားသမားတှဆေီက အကောငျးဆုံးအရညျအသှေးတှကေို ညှဈထုတျဖို့ပဲ ကွိုးစားရမယျ့အခွအေနပေါ။ နောကျတဈခုက အမျမရီဟာ လူငယျအသငျးနညျးပွတှနေဲ့ ပုံမှနျတှဆေုံ့လရှေိ့ပွီး အကယျဒမီက လူငယျကစားသမားတှရေဲ့ အနအေထားကိုလညျး စုံစမျးမေးမွနျးလရှေိ့ပါတယျ။
အမျမရီဟာ သူ သဘောကတြဲ့ Possession Game နညျးဗြူဟာထဲမှာ ကစားသမားတှေ အံဝငျအောငျ ကစားနိုငျဖို့ ကွိုးစားပွငျဆငျနတေယျ။ သူလိုခငျြတဲ့ ပုံစံက ရှငျးရှငျးလေးပါပဲ။ ဂိုးသမားဆီက စတငျတဲ့ တိုကျစဈက ခံစဈ၊ ကှငျးလယျကနေ ရှတေ့နျးဆီကို ဘောလုံးဆုံးရှုံးမှု အနညျးဆုံးဖွဈအောငျ ရောကျရှိဖို့ပါ။ အရငျလို ဂိုးရှမှေ့ာ Wasteful Passing တှနေဲ့ ကစားမယျ့အစား ထိရောကျမှုရှိတဲ့ Possession-based Style ကို ပွောငျးလဲပဈခဲ့တယျ။ ဒါကွောငျ့ အခု အာဆငျနယျကစားပုံက Entertainment ဖွဈတဲ့အပွငျ Effective လညျးဖွဈနတောကို ပရိသတျတှေ အသိပဲဖွဈပါလိမျ့မယျ။
သကွားဓာတျပါတဲ့ အခြိုရညျတှေ မသောကျရဘူး
အမျမရီဟာ လကေ့ငျြ့ရေးကှငျးမှာ သကွားဓာတျပါတဲ့ အခြိုရညျတှေ သောကျသုံးတာကို တငျးတငျးကွပျကွပျ ပိတျပငျထားတယျ။ အာဆငျနယျအသငျးကို အာစငျဝငျးဂါး ကိုငျတှယျခဲ့တုနျးက ကစားသမားတဈဦးဟာ ကိုကာကိုလာဗူးကို ကိုငျပွီး လကေ့ငျြ့ရေးကှငျးထဲ ဝငျလာခဲ့ပမေယျ့ အာစငျဝငျးဂါးဟာ လဈြလြူရှုခဲ့ဖူးတယျ။ အခုအခြိနျမှာ အဲဒီလို လုပျရပျမြိုးကို အမျမရီက သညျးခံနမှော မဟုတျပါဘူး။
၂၀၀၃-၀၄ ရာသီမှာ ပရီးမီးယားလိဂျသမိုငျးတဈလြှောကျ ရှုံးပှဲမရှိစံခြိနျနဲ့ ခနျြပီယံဆု ရရှိခဲ့တဲ့ အာဆငျနယျအသငျးဟာ ပရီးမီးယားလိဂျခနျြပီယံဆုကို ကိုငျမွှောကျခှငျ့မရတာက (၁၀)စုနှဈ တဈခုကြျောသှားပါပွီ။ ပွီးခဲ့တဲ့နှဈတှအေတှငျး FA ဖလားနဲ့သာ ခြှေးသိပျနရေတဲ့ အာဆငျနယျပရိသတျတှရေဲ့ မြှျောလငျ့ခကျြကို အမျမရီတဈယောကျ ဖွညျ့ဆညျးပေးနိုငျမလားဆိုတာကတော့ . . .